Olee otú m tọghata Microsoft Expression Encoder ka MP4? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Mmeghe encoder mp4 - edepụtara ajụjụ na azịza
Mmeghe encoder mp4 - edepụtara ajụjụ na azịza
Olee otú m tọghata Microsoft Expression Encoder ka MP4?
PịaEncodetaabụ. Nịm gị n'elu-larịị nhọrọ naEncodepanel dị ka ndị na-esonụ ụkpụrụ nduzi: Mmepụta Hazi Nke a ọnọdụ ezipụta ụdị faịlụ na ị ga-ike. Have nwere nhọrọ nke Windows Media,MP4(adịghị na Live Broadcasting Project), yana IIS Smooth Streaming dị ka usoro mmepụta.16 Maachị 2014
Ndewo YouTube na nke ikpeazụ m egosiri m gị ọmarịcha mmemme mara mma nke akpọrọ Microsoft Expression Encoder na ọ na-enye ụlọ nke na-edekọ pc gị maka n'efu yana akụkụ mmezi bụ nke kacha sie ike maka ndị ọhụụ na mpaghara a naanị bulite ha na YouTube ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna email ha. Yabụ ọ bụrụ na ịdekọ mgbe ịlere isiokwu ikpeazụ m ma mee ederede nke gị, ị ga-ahụ na oge ọ bụla ị gbalịrị izipu ozi ma ọ bụ bulite otu isiokwu na YouTube ọ na-ekwu na ọ bụghị nke iwu kwadoro ma ọ bụ ebe ọ bụla dị n'isiokwu a, '' Aga m egosi gị otu esi agbanwe usoro a. Ozugbo ịdekọtara ederede ntị gị, ị ga-ahụ ihuenyo a.
Nke a dị ezigbo mkpa. Mgbe ị gụchara ndekọ ma kwụsị isiokwu ahụ, ihuenyo ahụ ga-egosi ebe a na-ekwu na ndekọ ederede ụbọchị ịdekọtara oge na nke a ga-enyere gị aka ịchọta ndekọ gị nke ị mere. You nwere ike ihichapụ ha ma ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na isiokwu ahụ, mana ọ bụrụ na ị bụ, ị nwere ike pịa Send zụọ koodu ozugbo ịpịrị Sense na encoder kwesịrị ịpụta isiokwu gị ebe a, ị nwere ike idezi ya, mana agaghị m egosi gị otu ime ya n'isiokwu a mana enwere ike n 'odinihu ma oburu na unu ziterem email, emailm gha adi na nkowa ma oburu na m gha egosiputa gi otua esi edezi ya mana ugbua anyi na egosi gi otu m gha esi dezie ya. , yabụ bulite ya na YouTube ma ọ bụ ziga ya ebe a windo akpọ Mmasị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị hụghị ya ozugbo, gaa na Windows pịa Mmasị na nke a Ọ ga - egosiputa nke a ma site na ebe a ịchọrọ ịpinye koodu ahụ maka ngwaọrụ na W na V wee pịa na nke ahụ ị ga-enweta um, ị dị ka WindowsPhone ị nwere ike ịgbanwe usoro ahụ ka ị wee chọta ya ebe na W. indowsPhone nwere ike ịhụ windo ekwentị 7 xbox360 usoro nke bụkwa usoro xbox360 dikwa ire, i nwekwara ike iji ya maka youtube o kachasi nma n’otu oge iw ma oburu na ichota ct this and just click Apply, dị nnọọ abụọ pịa ya iji jide n'aka na ị na-anọdụ CVR wee chọọ ịpụ ka encode wee pịa isiokwu ọ ga-adị ka m ga-aga encode pịa isiokwu modecbr1000rr iver e dị ezigbo mkpa otu ihe na ị gaghị echefu mgbe ịme koodu / edezi ị ga-aga faịlụ ahụ wee kụọ encode n'ihi na ọ bụrụ na ịmeghị ya na ihe niile ị mere, a ga-azọpụta m na ihu ọma mgbe ị buliri ya, ọ ga-abụ site na ọkọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ịpị faịlụ a na koodu ọzọ, ozugbo ịmechara ị debe ya, ị nwere ike ịchekwa ya na desktọọpụ gị ma ọ bụ ọnọdụ ọzọ, gbanwere usoro ederede gị site na iji windo Mmasị na akụkụ aka ekpe aka ekpe ga-egosi dị ka nke a, ịpịrị koodu maka ngwaọrụ W na V ma họrọ otu ebe a. Ọ ga-amasị m n'eziokwu ịhọrọ Xbox 360 HD 720p dị ka nke a na-agbakọta na usoro a ma dakọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị ka emailing na emailing na ibugote isiokwu na YouTube dị ka ịpị isiokwu a Jide n'aka na Ọnọdụ gị setịpụrụ otu ngafe CBR ozugbo ị mere nke a, nke ahụ bụ gị wee lelee gị ka ị ga-etinye ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa ịzọpụta faịlụ m ga-aga n'ihu ma chekwaa ya na desktọọpụ m, m ga-akpọ ya aha maka gị ka ị jiri ya, ọ nwere ike ịchọta nchekwa ma nke ahụ kwesịrị ịnọ ebe a ugbu a kwesiri inwe ike ima na obu eziokwu, ogaghi enwe ike Ibu ya. O di nwute, si ebe a si na inwetara ya site ebea ugbua iga ahapu gi gwa anyi ma oburu na imeghari ozo na youtube imaatu. dị nnọọ ka m bulite, mgbe ị bulite ya ga-asị faịlụ na-ahọrọ gị na kọmputa ma ọ bụ mgbe ị na-eziga ozi ịntanetị ga-fọrọ nke nta ahụ, na ọ bụghị kpọmkwem otu, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ na-agbanwe usoro, um, ma na agbanyeghị si ozi ịntanetị ma ọ bụ mgbe na-ebugote na youtube ma unu ga-ajụ ka anya otú họrọ faịlụ site na gị comp uter ebe a ga-echekwa isiokwu ahụ, ya mere pịa faịlụ họrọ na kọmputa gị echere m na ị na-aga ọba akwụkwọ na ndoOh so sc or ee ls c mmemme mmemme ibelieve na naanị chọọ microsoftexpression encoder echeghị m na ọ na-aga ebe a, gaa mmemme faịlụ, naanị iji lelee ma mmemme mmemme ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ngalaba microsoft okwu ịchọrọ ebe a pịa encoder ebe a, site na pịa pịa m chere na ọ kwesịrị ịbụ ọrụ, gbaghara maka ọrụ uptakeulis ọ kwesịrị ịbụ otu n'ime ndị a nwee nwute, anaghị m eme ' t, n'eziokwu, ime ihe n'eziokwu, emebeghị m nke a n'ime ogologo oge, ya mere, ọ dị mma, ndo, m ga-akwụsịtụ n'egbughị oge, um, ụdịrị m furu efu na-achọ ime nkuzi a otu m siri kwuo ya ọ bụ, o were m ogologo oge m havent mere a youtube isiokwu na a mgbe mere nke a bụ ebe anyị kwụsịrị na-eme faịlụ site na kọmputa gị um, ya mere, dị nnọọ ịga n'ihu na pịa ya na ugbu a ị chọrọ ịga o Chọta Nkwupụta na gị dọkụmentị ma pịa Encoder Nkwupụta, ọ kwesịrị ịbụ 100% na otu n'ime fol ders oge a. Aga m ejide n'aka na ọ dị na ngụpụta mmepụta oge a, mana chọọ ụbọchị ị were ya na nseta ihuenyo gị kwesịrị ịdị ebe a, yabụ ka anyị gaa n'ihu wee pịa pịa pịa mepee yana ị nwere ike ịhụ, isiokwu m na-adị ebugo ya naanị koodu obere oge ka m nwee ike igosi gị na nke a ga-arụ ọrụ ọfụma m ga-akwụsịtụ ọsọ ọsọ n'ihi na nke a ga-ewe ntakịrị ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụghị oh anyị emechaa, ị ga-ekiri nke ahụ? Dịka ị pụrụ ịhụ ugbu a, ebugoro m Sussex n'ụzọ gara nke ọma, m gbanwere ogo m dị mma dị ka ndị mmadụ na-ekele maka ile anya biko echefula dị ka ọnụego ikwu ma denye aha ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla oh myemail ga-anọ na nkọwapụta umdon anaghị eme ihe n'eziokwu um achoghi ikwu okwu nihi na anam agaghi agu ha, enwere ike i hapu ya na ulo, zitere m ozi nzuzo na youtube ma o buru na obughi nani email mana ekele dika m siri biko echefula et na ikwu okwu na ịdenye aha ma daalụ ụmụ okorobịa
Olee otú m tọghata XESC ka MP4?
Olee otu iji tọghata xescfaịlụmp4ya na VLC
Next na Open Media interface, họrọ Njikwa taabụ, wee pịa Tinye ịgbakwunyemmmmmmmmmmọdụ vidiyo.
Next họrọ vidiyo na. ...
Next pịaGbanwee/ Chekwa ma họrọGbanwee.
Na-esote, pịa Chọgharịa wee họrọ vidiyo ahụ.
Faịlụ vidiyommmmmmmmmmị họrọ ka bụmmmmmmmmmmndọtị.
Olee otu mbubata MP4 video na Microsoft Expression Encoder 4?
Mbubata MP4 vidiyo na Microsoft Expression Encoder 4 Microsoft's Expression Encoder 4 bụ ihe egwu dị egwu nke na-agbanwegharị ihe nkiri dijitalụ m n'ime usoro Silverlight's SmoothStreaming. Nkwupụta Microsoft Microsoft Encoder 4 bụ ihe egwu dị egwu nke na-agbanwegharị ihe nkiri vidio dijitalụ m na usoro Silverlight's SmoothStreaming.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma banyere Encoder Expression?
Nkwupụta Encoder na-enye mmelite, ngbanwe, na mbipụta nke vidiyo vidiyo bara ụba na Microsoft Silverlight. Tọghata na mpikota onu multiple video formats ka SMPTE ọkọlọtọ VC-1 video maka mobile, web, na HD video ndapụta.
Chọrọ Microsoft Expression Encoder 4 SP2?
Tọghata na mpikota onu multiple video formats ka SMPTE ọkọlọtọ VC-1 video maka mobile, web, na HD video ndapụta. Maka usoro ọrụ rụọ ọrụ nke ọma, mepụta ndebiri ahaziri na ngwakọ Ngosiputa, ma tinye na desktọọpụ ma ọ bụ nkesa iji mee ka ahụmịhe ọhụụ na Windows, Mac na ngwaọrụ dịrị Na-achọ NET Framework 4.
You nwere ike iji Encoder 4 na mp4 codec?
Iji mee ka akụkọ ahụ dum dị nkenke, ọ bụ n'ihi ikikere ka ha na-enweghị ike ịnye kodịk ahụ maka iji anyị. Ndị na-enweghị ike inye iwu nyere anyị software na codec gụnyere. Ọbụna m gwara ha ka ha gbanwee okwu na faq, ebe ọ na-ekwu na ngwanrọ ahụ bụ otu mkpọsa, mana ha agbanwebeghị ya ...